एजेन्सी : सास्त्रका अनुसार यस्ता व्यक्तिको हातमा कहिले पनि पैसा टिक्दैन जानिराखौ : शास्त्र मा लेखिए अनुसार हाम्रो सारिर मा हुने कोठी को धेरै नै महत्व रहन्छ हामीले जति पैसा कमाएपनि हाम्रो यी अंग हरुमा कोठी छ भने हाम्रो हातमा पैसा टिक्दैन समुन्द्र शास्त्र का अनुसार हाम्रो सरिरमा हुने कोठीहरुले सबै ठाउ ठाउ बाट फरक अर्थ दिई राखेका हुन्छन सबै कोठीहरुको छुट्टाछुट्टै महत्व छ ! कतिपय भागमा हुने कोठी ले हाम्रो जीवनमा धेरै राम्रो फल दिएका हुन्छन भने कतिपय ठाउमा हुने कोठीले नराम्रो फल दिएका हुन्छ ! हाम्रो सारिर को यी भागमा कोठी हुने व्यक्तिहरुको हातमा पैसा टिक्दैन हेर्नुहोस !
एजेन्सी । सबै १२ राशि एक विशिष्ट राशि तत्व अन्तर्गत पर्दछन् । मानिसका राशि अनुसार उनिहरूको बानी व्यवहार फरक फरक रहेको हुन्छ । मानिसहरूको कुण्डलीमा ग्रह नक्षत्रको सिधै असर पर्छ । जसले गर्दा उनीहरूको जिन्दगी प्रभावित हुन् पुग्छ । यही नक्षत्रको आधारमा नै प्रत्येक मानिसको राशि निश्चित हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरूको भविष्य र स्वभावको सङ्केत मिल्ने गर्दछ । धेरै मानिसहरूलाई भिडमा बस्न मन पर्छ भने केही यस्ता राशिहरू पनि छन् जुन राशि भएका मानिसहरूलाई भिडमा बस्न मन पर्दैन जो धेरै जसो एक्लै बस्न रुचाउँछन् । जान्नुहोस् ती कुन राशिका मानिसलाई भिडभाड मन पर्दैनः